Salim / Nayan Raj Pandey
सलिम / नयनराज पाण्डे
मलाई एउटा कथा लेख्नु थियो । मैले कथाको शीर्षक पनि सोचिसकेको थिएँ–सलिम ।
सलिम मेरो बाल्यकालेको साथी–मुसलमान । उसको बाबु एकलैनी बजार जाने गल्लीको मुखैनेर बसेर जुत्ता सिउँथ्यो । पालिस गथ्र्यो । मोची भन्थे सबै उसलाई । असलम नाम थियो क्यार उसको ।
Read more about Salim / Nayan Raj Pandey
Seto Chithi / Shreeom Shrestha Rodan
सेतो चिठी / श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’
Shreeom Shrestha Rodan
Read more about Seto Chithi / Shreeom Shrestha Rodan
Tankiko Phool ra Ek Jodi Aankha / Ilya Bhatatrai
टाँकीको फूल र एक जोडी / आँखा इल्या भट्टराई
वरिपरिको परिवेशमा छरिन आइपुगिसकेको छ । अगिदेखि तप्त भएको वातावरण विस्तारै शीतलमा अनूदित हुँदै छ । कताबाट हो कुन्नि अचानकै एक झोक्का हावा चलेर जडवत् भइरहेको निःशब्द वातावरणलाई आफू पनि यतै कतै छु है भन्ने सङ्केत दिएर गयो । त्यहीँ छेउको टाँकीको रूख सेता फूल आफूभरि फुलाएर गमक्क परेको छ । सेतो शुभ्र टाँकीले वातावरण उजेलिएको छ, तर मेरो मन……! अगिदेखिनै घुर्मैलो तुवाँलोले टम्म ढाकिएको मेरो मन भने अब, सके म बाँचुन्जेल सम्म पनि उघ्रिन सक्ने छैन ।
Read more about Tankiko Phool ra Ek Jodi Aankha / Ilya Bhatatrai
Mero Tharu Gaun / Mahesh Bikram Shah
पोहोरको दसैं गाउँमा मनाएका थियौं । फर्किने बेला साथी सोनालाल चौधरीले भनेको थियो, ‘और साल पे आइहो । तु आइठ त एकदम मजा लागठ ।’ म धेरै वर्षपछि कैलाली जिल्लामा अवस्थित मेरो गाउँ भंग्रैया गएको थिएँ । गाउँका मुखिया बडघर राजेन्द्रले यसपालि गाउँका युवायुवतीहरूलाई भेला पारेर सखिया नाचको चाँजोपाजो मिलाएका थिए । ‘गाउँका केटाकेटीहरूसमेत बम्बइया सिनेमा भन्यो कि भुतुक्कै हुन थाले । अब कसले नाच्छ सखिया नाच ?’ लोक संस्कृति हराउँदै गएकोमा उनी चिन्तित थिए । तैपनि उनले हरेस नखाई युवायुवतीहरूलाई सम्झाइबुझाई सखिया नाचको समूह तयार गरेका थिए । धेरै वर्षपछि गाउँलेका आँगनमा रातो ब्लाउज र सेतो लुंगीमा सजिएका तन्ने
Read more about Mero Tharu Gaun / Mahesh Bikram Shah
भित्र पस्नासाथ युवतीले आफ्ना ठूला ठूला नजर घुमाएर चारैतिर हेरी। अनि कुर्सीमा गइ बसी। उसका उत्सुक नजरले कसैलाई खोजिरहेको झैँ लाग्दथ्यो। ऊ बारम्बार आफ्नो नाडीमा बाँधिएको सानो घडीतिर हेर्दथी अनि फेरि ढोकातिर। समय पनि उही थियो जो मैले दिएको थिएँ। युवतीका हावभावले र उसका उत्सुकतापूर्ण नजरले कसैको खोज गरेकाले ऊ नै सुषमा हो भनी अन्दाज लगाउनमा मलाई केही दिक्क लागेन तर म भने मौन भएर बसेको थिएँ। म चाहेर पनि सुषमाका छेउमा जान सक्दिनथेँ ।
Read more about Pen-Friend / Maya Thakuri
Tukrieka Sapanaharu / Ravi Pranjal
टङ्…टङ्…टङ्… कहीँ टाढा मन्दिरबाट घण्ट बजेको आवाज आइरहेको थियो । रातको मध्य प्रहर थियो। मौन थियो कोठा अनि मौन थियो ऊ पनि । सानो कोठा, दुइवटा खाट, एउटा मेच, भुइँमा ‌ओछ्याइएको खजमजिएको दरी, भित्तामा झुण्डिएको एउटा पुरानो क्यालेन्डर र मेचमाथि थुप्रिएका उसका कपडाहरुलाइ छोडेर अरु सामान भन्नुमा चुरोटका उदास ठुटाहरू -जो यत्रतत्र छरिएका थिए । एउटा खाटमा ऊ स्वयम् बसेको थियो भित्तामा अडेस लागेर ।
Read more about Tukrieka Sapanaharu / Ravi Pranjal
Time Travel / Sabina Sindhu
प्रयोगशालामा धेरै वस्तुमाथि प्रयोग र परिक्षण गरिसकेपछि डा. एस डी नयाँ अनुसन्धानमा लागेका थिए । उनी चाहान्थे वर्तमान समयबाट बिगतमा फर्किन सकियोस् । सदियौं पहिलेका ब्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट होस् । त्यस्तै पँचासौं वर्ष पछिको आफ्नो प्रतिरुप र त्यस बेलाको परिवर्तनलाई आफैंले भेटेर पुनः आफ्नो युगमा फर्किन सकियोस् । डा. शर्मा उनको प्रयोगहरुमाथि साथ दिन बसेका थिए । प्रयोगशालामा अन्य कर्मचारी र सहयोगीहरुको समेत उपस्थिति हुन्थ्यो । उनीहरुले विज्ञानको क्षेत्रमा गरेका धेरै प्रयोगहरु सफल समेत भएका थिए । वास्तवमा उनीहरु विश्वमा नाम कहलिएका वैज्ञानिकहरु थिए ।
Read more about Time Travel / Sabina Sindhu
Deutetoli / Mohanraj Sharma
द्यौतेटोली / मोहनराज शर्मा
Read more about Deutetoli / Mohanraj Sharma
पालो जनताको / प्रेम नेपाली
रंगेलीपाटनमा मानिसहरूको विचित्रको जमघट थियो । गाउँ गाउवाट राता झण्डा बोकेको गाउँलेहरू जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा घन्काउदै भेलामा आई पुगेका थिए । भतभति पोल्ने घाममा पसिनाले चिप्लिकै भिजेका गाउँलेहरू ठेलम ठेल गर्दै सभामा वसेका थिए । घरदेखि एक घण्टा पैदल हिडेर दीनवन्धु शर्मा श्रीमति लिएर नेताहरूको भाषण सुन्न मानिसहरूको घुच्ची सहदै सभामा आइपुगे ।
Read more about पालो जनताको / प्रेम नेपाली
योग्यता / जगदीश घिमिरे
सुन्ने सुनाउने क्रम अनन्त छ, तर कथाको अन्त्य यस्तो छ -
Read more about योग्यता / जगदीश घिमिरे